Heater "Izibuyekezo Megador 'mayelana nokuthi iziphi izinhlelo ungafunda kulesi sihloko, kukhona imishini eyonga amandla for amalahle izakhiwo zokuhlala, izakhiwo zezimboni kanye izakhiwo zebhizinisi.
Umenzi iqinisekisa imikhiqizo umsebenzi izinga iminyaka 10, futhi ungakwazi ukubala ukumelana amathonya kwemvelo nolaka, kanye nokuvikeleka ngcono.
Oluqanjwe heater kule esigabeni sokukhiqizwa sivivinywa, ihlolwe, futhi kuphela ke ukungena kwimakethe yokuphehla mass. Yingakho nomkhiqizi unesibopho izinga convector ngamunye.
Umthengi Izibuyekezo mayelana izakhiwo eziyisisekelo izinkampani heater "Megador"
Heater "Megador" Izibuyekezo ukuthi ngokuvamile ngokwanele omuhle kuphela, ungathathi isikhala kakhulu, bese ugcine ngempumelelo ugesi. Kusukela amazwi abathengi, imishini iphephile ngokuphelele ukusetshenziswa ekhaya lapho kukhona izilwane nezingane. Amadivayisi avikelekile kahle kusuka umswakama nangesikhunta, kanye ukuvumela ukuba ngakususi okuvela kuyo nezilwanyana ezincane endlini.
Ngokusho abathengi, idivayisi bheka yesimanje, ukuze bakwazi bakwamukele cishe kunoma iyiphi elingaphakathi. Namuhla convectors lokhu umakhi kuyanda phakathi kwabanikazi bamabhizinisi yangasese. Njengoba yaziwa, inkampani laqala ukwenza womshini convectors emuva ngo-2011. Phakathi nale nkathi, yena ukhiphe inombolo enkulu yemikhiqizo, kuhlanganise Baseboard Heater "Megador 'Izibuyekezo mayelana nokuthi iziphi izinhlelo ungase ube nentshisekelo ukufunda.
Heater lenkampani kungenziwa ngokuthi bomklamo, izinto eziningi ezafika ungashiyi izindonga workshops kanye laboratories, ngakho wakwazi ukusungula ukukhiqiza esiyingqayizivele hhayi kuphela, kodwa futhi ukudayiswa ngempumelelo. Abathengi ukuthola "Megador" omunye abakhiqizi elikhulu heater, amandla ukulondoloza uhlobo engasetshenziswa hhayi kuphela ezimweni zansuku zonke, kodwa futhi ngezinga ezimbonini.
Heater "Megador" izibuyekezo kuzokuvumela nenze izinqumo ezifanele kukhona umkhiqizo ezingabizi futhi eyingqayizivele, okungukuthi isithelo ngentuthuko yakamuva. Ngakho-ke, ngo-ukudayiswa ngokwethukela wathola onobuhle ezintsha izimo ezahlukene ukusetshenziswa futhi eziqondile-injongo izakhiwo.
Ukuvakashela esitolo, ungathola convector, okuyinto ekufanele.
Faka idivayisi, unga:
kule abamba ukushisa;
ezemfundo kanye zemidlalo;
Heater "Megador" Izibuyekezo ukuthi kufanele ufunde ngaphambi izimpahla ukuthenga, Kunconywa ukuba eduze udonga ngaphansi kwewindi. Ukugcina Isikhala ekusetshenzisweni ngokugcwele kudivayisi ungakhetha amadivayisi engela, okuyinto inkinga emakhoneni ezimanzi. Umklamo has imilenze efakwe heater. Ukusebenzisa heater baseboard, ungakwazi ukufaka kwi odongeni usebenzisa iziqobosho ekhethekile, okuyinto zitholakala emzimbeni. Lungisa amandla kwelinye ezimbili izindlela, okungukuthi, ngesandla, noma nge control lokushisa. Hamba ihlale isikhathi eside futhi heater ixhunyiwe. ukusebenza Tune kungaba kudingeka onge amandla, ngaleyo ndlela ukwazi ukwakha sezulu ukhululekile zasendlini.
Izibuyekezo heater "Standard" kusukela "Megador"
Baseboard heater uhlobo "Megador" isebenza isimiso amalahle izindonga. Lokhu kuzokwehlisa nokushisa ngokusebenzisa ebusweni. Lolu hlobo idivayisi angathengwa cishe nanoma iliphi igumbi, lokhu kungaba isakhiwo izinjongo kwetimboni, temabhizimisi kwasekhaya. Njengoba abasebenzisi, ama-heater "Standard" uchungechunge abathi ngezinga eliphezulu ukuphepha komlilo, yingakho angasetshenziswa ubusuku nemini. Ikamelo akuyona incibilikiswa, futhi songa amandla heater kuyoba at kokuwa.
Njengoba amakhasimende ziye zaphawula aphansi-lokushisa heater efakwe ngaphakathi heater idatha okwenza kungabi ukusha futhi lunikeza ukulondeka umuntu contact nedivaysi. Uthuli lapho iyunithi akuyona evuthayo futhi akukukhanyiselanga, le microclimate egumbini is hhayi kahle, futhi umoya-mpilo hhayi ashiswe. Baseboard heater "Standard", okuyinto libuyekeza kuzokusiza ukuba wenze isinqumo esihle sincane kakhulu. Kodwa ngisho izilwane lezi amayunithi ziphephile ngokuphelele. Abasebenzisi like yokuthi lezi onobuhle ungathenga e bezinhlamvu onsundu ngokuphaphathekile noma abe mhlophe, futhi eziko supply kungenziwa kwesokunxele noma kwesokudla.
Izibuyekezo ze-heater "Ukukhanya" kusukela "Megador"
Baseboard heater, kagesi "Megador" ethulwa futhi "Ukukhanya" chungechunge. Le nguqulo iyona engabizi kakhulu futhi elula, kodwa akububonisi umlamuli amandla. Heater abe ukulungiswa fixed 50 no-100%. Uma kuziwa ukulungiswa MF100 futhi MF150, ngabo esiphezulu amandla kuze kube Watts 400. Uma ufuna ukuthenga imodeli qinile kufanele uthanda MF200, esilinganisweni wathi kule samuntu, kuze Watts 600.
Abasebenzisi like yokuthi izindlu kulezi kumadivayisi uvikelekile ingress amanzi lezinto angaphandle. Heater baye tho futhi akuzona yokwanda kwama wesaba futhi lehla ke. Ngakho-ke, ukusebenzisa lolu imishini, ngokubona amakhasimende, kungenzeka endlini izwe noma ingadi. Abathengi ukugcizelela ukuthi lezi amadivaysi ezisebenza at voltages phakathi 170 V futhi awasikiseli isidingo uyalondoloza.
Yini ukukhetha: heater lefoni noma convector kusukela "Megador"
Kaningi, abathengi kuqhathaniswa heater kanye heater lefoni. "Megador" inikeza ukudayiswa lokuqala, okuyinto ngezindlela eziningi bebakhulu amadivayisi infrared. Ngakho, ukusebenza kwe-heater lefoni kuhilela ukulahlekelwa, kodwa ukusebenza convector ziyancipha ngenxa isimiso yokusebenza. Convector abakwazi kubangele nomphumela omubi umoya omile, futhi ukusebenza kwawo akuyona ephelezelwa iphunga ezingemnandi. Esikhathini eziphansi kungathiwa izinzuzo eyodwa ezengeziwe zalesi simiso, ngoba izindleko ushibhile infrared idatha amayunithi.
Heater "Megador", imfundo manual okumele ifundwe ngaphambi kokuqala imishini akufanele yembozwe ngesikhathi operation. On akufanele omisiwe izinto, izindwangu nezingubo. Lokhu kungadala okweqile, lokhu kungabangela ukwehluleka imishini futhi kubangele umonakalo ngokuthi umuntu noma impahla.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi umenzi uyazicabangela lolu hlobo ukuhluleka njengoba icala okungezona isiqinisekiso singasebenzi. Uma ibanga kusuka lisebenze kagesi kunezingane ke akufanele zishiywe. Uma uhlela ukuba ahlukanisa iyunithi wakufaka iphakheji yokugcina yesikhathi eside, kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi izindlu kanye Ukushisa element is selehlile ngokuphelele phansi.
Baseboard heater uhlobo "Izibuyekezo Megador 'mayelana nokuthi iziphi izinhlelo ungafunda ngenhla, kufanele akhiwe kude izinto kalula deformable futhi izinto ezingase zibambe umlilo. Ungayisebenzisi imishini e ezivulekile ngaphandle kwesakhiwo. Musa ukuqaqa insimbi wedwa, ngisho uma ufuna ukufeza yokuhlanza yayo noma zokulungisa. Lapho iyunithi alisetshenziswa, kumele inqanyuliwe kwamandla, lokhu kusebenza futhi kunjalo uma uhlela ukuba afeze ezimanzi yokuhlanza izindlu.
Umenzi alinikezi izincomo ethize ukunakekelwa, kodwa kufanele uyikhiphe kusuka amapayipi phambi izinsizakalo convector. Ngezikhathi ezithile ebusweni izindlu kufanele ahlanze ngendwangu emanzi, ngakho-ke kuyadingeka ukuba ngakususi ukusetshenziswa insipho kanye Abrasives futhi yokususa ingcekeza elenkani.
Ngemuva lisebenze ukufeza Isikhala yokuhlanza ulula odongeni ukukhwezwa. Ukuze wenze lokhu, cindezela latches amabili ngemuva heater, ukudonsa iyunithi phambili. Ngokushesha uzokwazi ayikhiphe, ungakwazi geza odongeni lapho iyunithi wamiswa. Ngemva kokuphothulwa kudivayisi yokuhlanza kungenziwa wabuyela endaweni yalo.
Lapho convectors egumbini kumelwe kulondolozwe izinga lokushisa ezithile kanye nomswakama. Esimweni sokuqala, uhla kungaba kusuka -25 kuya +30 ° C, kanti owesibili - kusukela 40 kuya ku-90%. Lapho ukugcina convector lokushisa ububanzi uyanda futhi uya ngokuya kuhluka -20 kuya +80 ° C, futhi umswakama kufanele igcinwe ezingeni elifanayo.
Ungakhetha "Megador Khanyisa", heater yalolu hlobo Site emagcekeni cishe nganoma iyiphi injongo. Nokho, ngaphambi kokuba ukusebenza kubalulekile ukuba ufunde imiyalelo, kuwo ungakwazi ukuthola, isibonelo, iziphi amaphutha indlela luqedwe.
Lapho kuqala ivuliwe, iphunga uthuli evutha ayikwazi kubhekwe njengokwedelela ezikhomba ukusebenza engalungile iyunithi. Iphunga uzonyamalala emva kwamaminithi ambalwa we convector.
Yini ibhizinisi manje langempela: 2013
Amabhishi ase-Antalya - zasendle, ezithambile, ekhululekile ... Okuyikho